I-Semalt Expert - 7 Kumelwe ube ne-WordPress Plugin Types
Asikwazi ukuphika ukuthi amawebhusayithi angaphezulu kuka-25% namabhulogi ahlinzekwa yi-WordPress, okwenza kube uhlelo oluhle lokuphatha okuqukethwe kwikhompyutha. Kwakukhona izikhathi lapho i-blogger.com yayiwukuphela kokukhetha kwabathengisi bokuqukethwe nabalobi, kodwa manje i-WordPress isetshenziswe kakhulu futhi ithandiwe ngenxa yokwazi kwayo yokwandisa ukusebenza kweziza. Ngamazwi alula, ungakwazi kalula ukwengeza amakhulu ezinkulungwane zama-plugin kusayithi lakho le-WordPress futhi ungathuthukisa ukusebenza kwalo. Ama-plugin akwenze kube lula kubahleli nabangewona izinhlelo ukwenza nokwagcina iwebhusayithi yezobuchwepheshe. Awudingi ulwazi lwezobuchwepheshe ukuze uqalise iwebhusayithi ngoba ama-plugin we-WordPress akhona ukwenza umsebenzi wakho ube lula futhi usheshe kunanini ngaphambili. Amanye ama-plugin we-WordPress asisiza sikwazi ukuthuthukisa i-website noma ibhulogi yezimoto ngenkathi abanye besisiza ukuba sithuthukise izinga lokuguqulwa futhi sinciphise izinga lokunciphisa.
U-Oliver King, isazi esihamba phambili se Semalt Amasevisi Wezinhlelo Zedivayisi, uye wafanisa izinhlobo ezingu-7 eziyinhloko zama-plugin we-WordPress okufanele wazi ngakho.
1. Ukulondoloza isikhashana
I-Caching ingenye yezinhlobo ezinhle kakhulu futhi ezidume kakhulu ebhizinisini lakho le-intanethi. Kunganciphisa kakhulu isikhathi sokulayisha samakhasi akho wewebhu futhi unikeze isipiliyoni esivelele somsebenzisi. Futhi, lokhu kukusikisela ukuthi unganciphisa kanjani izinga lokunciphisa isayithi lakho futhi ushiya umthelela omuhle kumajini okusesha ikakhulukazi i-Google. Izingosi zakho zensiza ngokushesha, izikhundla eziphakeme zezinjini zosesho ziphakeme futhi ezingcono. Akufanele kusimangaze ukuthi lezi zivakashi zivame ukusuka kude nesayithi lakho uma zingapheli zingakapheli imizuzwana emihlanu. Yingakho kufanele uthuthukise ijubane lokulayisha lesayithi lakho ngendlela efanele ye-plugin. Nakuba kunezinketho eziningi ezitholakalayo, kodwa ama-plugin amahle kakhulu e-WordPress yi-W3 Total Cache ne-WP Super Cache.
2. Inketho yokubhalisa
Kumelwe ukuba uzwile ukuthi imali yonke imilayezo. Yilokho osomabhizinisi abaphumelelayo bakholelwa kukho. Uhlu olukhulu lwababhalisile lungakusiza ukwandise ibhizinisi lakho ngesilinganiso esisheshayo futhi kungakuthola umthwalo wemikhiqizo yokuthengisa. Izophinde ivumele abaphathi bewebhu babuyele izivakashi kumasayithi abo kanye namabhulogi ngokushesha..Ama-plugin angcono kakhulu wokubhalisa weWebPress yakho isayithi le-Newsletter Ukubhalisa kanye ne-WP Subscriber Pro.
Uma ufuna ukuhambisa ithrafikhi ephilayo kuwebhusayithi yakho noma ukuthuthukisa injini yokusesha, kufanele ukwandise amakhasi akho wewebhu we-SEO. Ukwengeza izihloko ze-meta, izincazelo namathegi we-meta ngesandla kunzima kakhulu futhi kuyamcasula, kodwa ukuhlanganisa ama-plugin kusayithi lakho kuzosusa intando yencwadi futhi kuzokusiza ukuthi ungeze ulwazi olufanele ngesikhathi esithile. Ama-Plugin amahle kakhulu futhi adume kakhulu e-WordPress kulesi sici yi-WordPress SEO ngo-Yoast, One SEO Pack, ne-SEO Ultimate.
Njengokuba kunjalo, bonke abakwa-webmasters kufanele bazi mayelana nesimo sewebhu yabo. Ngaphandle kolwazi olufanele mayelana nekhwalithi yethrafikhi yakho, awukwazi ukuthatha izinqumo zokuthengisa ezifanele. Yingakho kufanele uhlanganise isayithi lakho bese ufaka i-Google Analytics njengamathuluzi wokuhlaziya kuwo. I-Jetpack nayo inhle ukuhamba nayo njengoba ithola idatha efanele kuwe ngaphandle kokudala noma iyiphi inselelo kuwe.
5. Amakhasi ahambayo
Amakhasi wokufika enza indima ebalulekile ekuthuthukiseni nasekuthuthukiseni izinga lokuguqulwa. Uma ufuna ukuthuthukisa ukuthengiswa okungeziwe kuholela kokumaketha kokuqukethwe, ukumaketha kwezokuxhumana, nokukhangisa kwe-imeyili, kufanele uthole amakhasi okufika asebenzayo. Ikhasi lokufika lingenza abasebenzisi bakwazi ukubhalisela i-newsletters yakho bese benza ukuthenga kungenzeka. Ku-WordPress, kunama-plugin ahlukahlukene ukukusiza ukuthi udale amakhasi okuphoqa okuphoqelelayo, kodwa amakhasi we-Landing, i-Zedity ne-Optimize Press 2.0 yiyona engcono kakhulu.
6. Okuthunyelwe okuhlobene nokudumile
Cishe bonke abahlukumezi bewebhu beyinkinga yezinga eliphezulu lokunciphisa. Abasebenzisi beza kuwebhusayithi yakho, funda okuqukethwe, uthanda futhi wabelane ngawo, bese uhamba uye kwenye indawo. Lokhu kwenzeka uma ungatshelanga indaba yakho ngokungathandeki. Isivakashi ngeke sichitha imizuzwana engaphezu kwemizuzwana kuwebhusayithi yakho futhi udinga ukunciphisa izinga lokunciphisa izinga eliphezulu le-search engine. Ama-plugin amaningi adumile e-WordPress angakwazi ukwengeza okufakiwe noma okuhlobene okuthunyelwe kusayithi lakho yi-WordPress Posts Posts, futhiYet Another Plugin Posts Plugin.
7. Ukuhlanganiswa komphakathi wezokuxhumana
Izingosi zokuxhumana nabantu zisisiza kakhulu ekuthengiseni inthanethi. Cishe wonke amawebhusayithi agxile ekushayeleni kwezimoto kusuka kumanethiwekhi omphakathi. Ngaphezu kwamaphesenti angamashumi ayisishiyagalolunye abantu abasebenzisa i-Facebook ne-Twitter ukuxhumana nomndeni nabangane, akukho okungcono kunokusebenzisa ama-plug media media ukuze uwahlanganyele. Ama-Plugin amahle kakhulu e-WordPress kulokhu aphezulu ku-Ultimate Social Deux, i-Floating Social Bar, ne-Social Links Source .